Abavelisi beHuawei OLT | Kwichina Ifektri yaseHuawei OLT kunye nababoneleli
IBhodi yeHuawei GPFD yeBhodi ye-16-port GPON OLT ibhodi yojongano kunye ne-B + okanye i-C + SFP yemodyuli yeHuawei MA5608T MA5683T MA5680T
IBhodi yeHuawei GPFD yeKhadi lezibuko le-GPON eli-16 leli bhodi libonelela ngokufikelela kwinkonzo ye-GPON kwi-ONT efumana ukufikelela okuphezulu kwi-16 * 128 ye-GPON. Imveliso ye-OLT ibekwe njengesixhobo sokufikelela kwi-OLT, exhasa i-GPON, 10G GPON, EPON, 10G EPON, kunye neemowudi zokufikelela ze-P2P, kwaye ibonelela ngeenkonzo ezinje ngokufikelela kwi-Intanethi, ilizwi kunye nevidiyo. Njengothotho olukhulu, eliphakathi kunye nelincinci leemveliso, iimveliso ezininzi zinamaqonga esoftware kunye neebhodi zenkonzo.
Isixhobo se-SmartAX MA5680T / MA5683T / MA5608T sisixhobo se-GPON / EPON esidityanisiweyo sokufikelela kwimveliso esungulwe yiHuawei Technologies Co, Ltd. Inesikhundla sokuguqula amandla aphezulu, amandla e-3.2T, i-960G yokutshintsha amandla, amandla edilesi ye-MAC ye-512K, kunye neenkxaso Ukufikelela kumajelo angama-44 we-10 GE okanye i-768 yokufikelela kwi-GE.
Intengiso yeHuawei ngokuthe ngqo yokuThengisa iHuawei GPON OLT MA5683T
I-SmartAX MA5683T yiGigabit Passive Optical Network (GPON) yemveliso yokufikelela ngokudibeneyo.
Olu luhlu lubonisa umzi mveliso wokuqala wokudityaniswa kwe-Optical Line Terminal (OLT), ukudibanisa ubumbano oluphezulu kunye nokuguqula amandla, ukuxhasa amandla e-backplane ye-3.2T, amandla okutshintsha kwe-960G, iidilesi ze-MAC ezingama-512K, kunye nobuninzi be-44-channel 10 GE ukufikelela okanye i-768 GE amazibuko.
Ukuhlawula kunye nokuLondolozwa (O & M) kweendleko ngeendleko zesoftware kuzo zontathu iimodeli ezihambelana ngokupheleleyo neebhodi zenkonzo, kwaye kunciphisa ubuninzi besitokhwe esifunekayo kwiindawo zokugcina.
IBhodi yeHuawei GPSF yeBhodi ene-B + C + C ++ SFP
I-Huawei MA5800-X2, MA5800-X7, MA5800-X15, MA5800-X17 16-port GPON OLT iBhodi yokujongana
I-GPSF yeyona Bhodi yeNkonzo ye-GPON ithengisa kakhulu ye-Huawei MA5800 Series OLT
I-Huawei 16-GPON Port Interface Card ene-B + / C + / C ++ SFP yemodyuli
Inkxaso yokwahlulahlula i-ration 1: 128
Ukuhambisa isantya: 2.488Gbit / s, Fumana isantya: 1.244Gbit / s
Uhlobo lojongano: SC / PC
I-GPUF yeyona Bhodi yeNkonzo ye-GPON ithengisa kakhulu ye-Huawei MA5800 Series OLT
Umgama wokuThumela uMax: 20KM
IHuawei yoqobo 50A 100A Isilungisi ETP48100-B1 220V-48V OLT yoNxibelelwano lwaMandla oMbane oGuqulayo
ETP48100-B1 OLT Ukunikezelwa kwamandla
I-ETP48100-B1-50A sisiguquli-iklasi ye-AC ukuya kumguquleli wamandla e-DC, iguqula amandla e-220V / 110V AC ukuya -48V DC amandla, ukuphuma kwe-MAX 50A. I-ETP48100-B1-50A ineziphumo ezi-4, imveliso nganye ye-MAX 25A; Ukuba ubuze nge-R4850G2 ezimbini, iziphumo zizonke zinokuba yi-100A.
Le PSU inikwa imodyuli yokulungisa enye yePSU R4850G2 inika Inkcazo: 53.5V / 50A imveliso, imodyuli yokujonga iliso ye-PMU 11A kunye neslot simahla sokufaka enye imodyuli kunye namandla ukuya kuthi ga kwi-100A.
I-Huawei MA5800T GPHF C + C ++ 16 izibuko leKhadi leBhodi yeNkonzo ye-GPON
I-GPHF yeyona Bhodi yeNkonzo ye-GPON ithengisa kakhulu ye-Huawei MA5800 Series OLT
I-Sfp C ++, Umthumeli weXfp, Ixabiso leHuawei Olt, Imodyuli yeFiber Optical, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, IHuawei Qsfp +,